Ekoatora: Blaogy Miady Amin’ny Herisetra An-tokantrano · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Jona 2018 2:53 GMT
Vakio amin'ny teny Nederlands, Français, Español, 繁體中文, 简体中文, English
Vao haingana ny fiadidiana ny tanànan'i Guayaquil; any Ekoatora [amin'ny teny espaniola],no namatsy fifaninanana misokatra ho an'ireo blaogera, vao manomboka na efa zatra, mikasika ny lohahevitra manaraka: ”Voaaro ve isika any an-tokantranontsika tsirairay avy?”. Nosafidiana ity lohahevitra ity mba hanazavana ireo olana herisetra anivon'ny tokantrano ary hanolorana vahaolana mba hamongorana azy ireo any amin'ny isan-tokantrano sy anivon'ny vondrom-piarahamonina.
Na nisy tsikera vitsivitsy aza [amin'ny teny espaniola] momba ny dokambarotra natao manodidina ilay fifaninanana ary ahiahy hafa ihany koa, mifandray amin'ny hoe tsy hamorona blaogy fa-tsy ny mba handraisana anjara amin'ilay fifaninanana fotsiny ihany ny sasany, dia tratra ireo tanjona napetraka tany am-boalohany [amin'ny teny espaniola]. Betsaka ihany ireo blaogera nandray anjara tain'ny farany ary nanapaka ny mpitsara. Ireto ireo efatra mpandresy nahazo ny loka vola.
Violencia Discreta [amin'ny teny espanioa] dia mitady ny hampiroboroboana ny fandriampahalemana ao anivon'ny tokantrano, ary avy amin'izany dia mankahery ny fitovian'ny lahy sy ny vavy. I Fernando Landin sy i Princesa Quil no mpanoratra ity blaogy ity. Nanoratra lahtsoratra momba ny lanonana fanomezana ny loka ity farany, izay nanazavany ny antony nanosika azy handray anjara tamin'ilay fifaninanana sy ny hoe ”fa maninona ny vehivavy no voaaro kokoa eny an-dalana noho ny any an-tranony”:
Hogar Lugar seguro? no anarana nomen'i José Cruz ny bilaoginy. Marihany fa misy ny marimaritra iraisana amin'ny fierreretana fa izay rehetra mitragna aao an-tokantrano dia tafiditra anatin'ny sehatryny fiainana manokana, ary io no manazava amin'ny ampahany ny tsy firesahana ny herisetra an-tokantrano ho fantatry ny daholobe. Mba hanampiana ireo vehivavy hiady amin'ny fanararaotana zakain'izy ireny, dia natsangany ny lisitr'ireo toerana tena tokony halehan-dry zareo hitadiavany fanampiana, any aminà tanàna roa ao Ekoatora: Quito sy Guayaquil
Blaogy iray hafa mitondra ny anarana mitovy amin'ny an'i José Cruz. Hogar: Lugar seguro? dia noforonin'i William Zea Morales. Nanangona fijoroana vavolombelona maro ary manazava ny fomba niainan'ny vehivavy ekoatoriana enina amin'ny folo ny herisetra ara-batana, ara-tsaina na ara-nofo ataon'ny vadin'izy ireo. Ity ny tantaran'ny vehivavy 54 taona antsoina hoe Isabela:
Tsy nahazo loka ny Prevenciòn de Violencia Intrafamiliar, Guayaquil [amin'ny teny espaniola] saingy nahazo ny Fanomezam-boninahitra Voalohany. Psikology ary mitondra ny anarana hoe Juan Robles Chang ny mpanoratra ilay blaogy. Maneho hevitra mikasika ireo fomba sy toeria maro isan-karazany izay mahatonga ny fisorohana ny herisetra an-tokantrano ho siansa izy. Manolotra sary vitsivitsy izy mikasika ireo adihevitra niseho nandritra ny Andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny Ankizy tamin'ny novambra 2008 .